အမေးအဖြေများ - Lanlin Printech
ကျနော်တို့ရှန်ကျန်းမြို့, Canton ခရိုင်, တရုတ်၌ရှိကြ၏။
1) ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် quotation အများနှင့်လူနာဆက်သွယ်ရေးများအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး။
2) ။ အမိန့်ဖြည့်စွက်ဖို့စျေးနှုန်း, ခဲţine, နမူနာ, ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းစသည်တို့ကိုအတည်ပြုပါ။
3) ။ အရောင်းသင်တို့ဆီသို့ငါတို့ကုမ္ပဏီတံဆိပ်ငွေလွှဲစာတမ်းတန်ဖိုးငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့။
4) ။ ဖောက်သည်သိုက်စီစဉ်ကိုဘဏ်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းပေးပို့ပါ။
5) ။ ကနဦးထုတ်လုပ်မှုစီစဉ်ပေးလိမ့်မည်ဦးဆောင်အချိန်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ငါတို့သစ်ကိုခဲအချိန်ညှိ, မည်သည့်မသေချာမရေရာကိစ္စရပ်များဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အတွက်ဖောက်သည်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
6) ။ အဆုံးထုတ်လုပ်မှုကျနော်တို့ခွင့်ပြုချက်အဘို့သင်တို့ဆီသို့ဓါတ်ပုံများပေးပို့ပါလိမ့်မယ်, ငါတို့သည်သင်တို့လည်းတင်ပို့ခြင်းမပြုမီတတိယပါတီစစ်ဆေးရေးစီစဉ်နိုင်ပါတယ်ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်တင်ပို့စီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။
7) ။ clients ချိန်ခွင်လျှာစီစဉ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါခြေရာခံအရေအတွက်ကအကြောင်းကြားနှင့် client များသို့မဟုတ်ပင်လယ်တင်ပို့များအတွက်မူရင်း B / L များအတွက်ကှကျ၏ status စစ်ဆေးပါ။
8) ။ သင်ကုန်ပစ္စည်းများခံယူသူတို့ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကျေနပ်သည့်အခါ 0rder "finish ကို" ဟုပြောနိုင်ပါသည်။
9) ။ အရည်အသွေးမြင့် & ဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်တုံ့ပြန်ချက် & အကြံပြုချက်နှင့် ပတ်သက်. Lanlin မှတုံ့ပြန်ချက်ကျနော်တို့ပိုကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
10) ။ သင်လိုအပ်သည့်အခါ Lanlin ပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
4.What တစ် quotation အများအတွက်ဖောက်သည်ဘက်မှသတင်းအချက်အလက်လိုအပ်သလဲ?
သငျသညျဘယ်နှစ်ယောက်အရောင်များကို print ထုတ်?
ဒါကြောင့်ပုလင်းများ၏ buttom မှာမှတ်ပုံတင်ရပ်နားရှိပါသလား
အီးမေးလ်ပေးပို့ ကျေးဇူးပြု. info@lanlinprintech.com,ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုသိကြကုန်အံ့။
6.Can သငျသညျအရန် Pre-ပုံနှိပ်စက်များကဲ့သို့စက်, post ကိုပုံနှိပ်စက်များကို?
ဟုတ်ပါတယ်, အီးမေးလ်ပေးပို့ ကျေးဇူးပြု. info@lanlinprintech.com,ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုသိကြကုန်အံ့။
TT, LC အနောက်ပိုင်းပြည်ထောင်စု
11. အဘယ်ကြောင့်ဆီမီးခွက်တင်နိုင် LED?
အခုတော့ LED ကိုခရမ်းလွန်ဆီမီးခွက်တင်နိုင်သည့်ပုံနှိပ်ခြင်းကုမ္ပဏီများကပုံမှန်အားဖြင့်မွေးစားသောစိတ်သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
1) ပါဝါအများကြီးနိမ့်နှင့်စျေးနှုန်းပိုက်ဆံချွေတာကြောင့်သမားရိုးကျခရမ်းလွန်မာကျူရီမီးခှကျ၏ထက်စျေးပေါဖြစ်ပါတယ်။ ပြဒါးဆီမီးခွက်၏တန်ခိုး 1.8-5 KW နေစဉ် LED ကိုဆီမီးပါဝါ, 400 ခန့် w ဖြစ်ပါတယ်။
2) နဲ့ LED မီးခှကျ၏တစ်သက်တာရှည်လျားလွန်း 8000 နာရီအထိပြဒါးဆီမီးခွက်ရဲ့တစ်သက်တာ 800 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ မာကျူရီမီးခွက်သည်စားသုံးသူဖြစ်ပါတယ်။
3) ပြဒါးဆီမီး Ultraviolet အသားအရေအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အရေပြားမှပြဒါးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲဆီမီးခွက် LED ။
4) သမားရိုးကျခရမ်းလွန်မာကျူရီမီးခှကျကို pre-အပူအဘို့မိနစ်အနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် LED ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ လျှပ်စစ်ပါဝါရုတ်တရက် OFF နှင့် ON ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါကခရမ်းလွန်မာကျူရီမီးခွက်သည်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏တစ်သက်တာလျှော့ချပေးပါတယ်။ နေစဉ်နဲ့ LED မီးခွက်သည်အဘယ်သူမျှမထိခိုက်စေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် LED မီးခှကျကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
5) သေးအတိုင်းအတာ, လွယ်ကူသော installation နဲ့စစ်ဆင်ရေးမှာအနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်။
နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. 12.What?
အာမခံချက်ကုန်ပစ္စည်းကိုလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှရေတွက်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအာမခံချက်စဉ်အတွင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်တာဝန်ခံအခမဲ့ကုန်စည်များ၏ချို့ယွင်းချက်ဆန့်ကျင်အစိတ်အပိုင်းများအစားထိုးလိုက်ပါ။ ထိုလူအပေါင်းတို့စက်ရဲ့ဘဝနေစဉ်အတွင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပေး။
အခမဲ့တပ်ဆင်အခမဲ့လေ့ကျင့်ရေးနှင့်တစ်သက်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု; အဆိုပါဈေးဝယ်ပတ်ပတ်လည်လက်မှတ်တွေ, ဟိုတယ်, ငါတို့အင်ဂျင်နီယာစားစရာဘို့ချေ;
13. လေးအရောင်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်စေ, CMYK အရောင်မော်ဒယ်ကဘာလဲ?
အဆိုပါအနုပညာလက်ရာများကိုဖန်တီးပြီးတော့ဓာတ်ပုံပြပွဲထုတ်ဘို့လိုအပ်အရောင်များကိုအပြည့်အဝရောင်စဉ်ကိုဖန်တီးရန်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့လေးအရောင်များ (CMYK) သို့ကွဲကွာသောအခါ four-အရောင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်အရောင်အဆင်း၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကကုန်ကျစရိတ်, အချိန်နှင့် set-တက်လျှော့ချ, သာ4ဖန်သားပြင်ကိုသုံးပြီး simulated နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါစီဘီအရောင်များ၏ vibrancy နဲ့အပေးအယူဆိုလိုတာကရောနှောနေခြင်းနှင့်ပိုပြီးစများမှာရန်လိုအပ်သည်။